အစွယ်​လိုသူမိဖုရားတဲ့လား?..ကျမတကယ်​လိုချင်​ခဲ့တာက မင်း​ဆဒ္ဒန်​ရဲ့အချစ်​တစ်​ခုတည်းရယ်​ပါ… - Thadin
March 3, 2019 Admin Kwee KNOWLEDGE, RELATIONSHIP Comments Off on အစွယ်​လိုသူမိဖုရားတဲ့လား?..ကျမတကယ်​လိုချင်​ခဲ့တာက မင်း​ဆဒ္ဒန်​ရဲ့အချစ်​တစ်​ခုတည်းရယ်​ပါ…
အင်​ကြင်းပန်းမှာ ခါချဉ်​​လေးကပ်​ရုံနဲ့ ကမ္ဘာအဆက်​ဆက်​ သုဘဒ္ဒါမုန်းရက်​ခဲ့တာ မဟုတ်​ပါဘူး…
ပြိုင်​ဘက်​နဲ့ ယှဉ်​ရင်​ အချစ်​​တွေအကုန်​အစင် ​မရခဲ့လို့သုဘဒ္ဒါရင်​မှာ နာကျင်​​ကြေကွဲခဲ့ရတာပါ…. ဒါ​တွေကို ရှင်​နားလည်​ရဲ့လား မင်း​ဆဒ္ဒန်​
ဟိမဝန္တာ ​တောင်​စဉ်​ခုနစ်​ထပ်​မှာကျမဟာ ရှင့်​အတွက်​ဆို အသက်​​ပေးဖို့လည်း အဆင်​သင့်​ဖြစ်​ခဲ့ပါရက်​နဲ့ ဘဝတစ်​ခုလုံး​ပေးဆပ်​ ချစ်​ခဲ့တာ​တောင်​ ရှင်​ပြန်​​ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာက ဒုတိယ တဲ့လား….ဟင့်​အင်း…
ပထမချစ်​ခြင်း မဟုတ်​ရင်​ ဒုတိယအဖြည့်​ခံ​တော့ ဘယ်​မိန်းမသားကမှ မဖြစ်​ချင်​ဘူး….
မဖြစ်​နိုင်​ဘူး မင်း​ဆဒ္ဒန်​… မဖြစ်​နိုင်​​တော့ပါဘူး
ဒုတိယ ဆိုတာ ဘယ်​လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်​နိုင်​ခဲ့ပါဘူး မင်း​ဆဒ္ဒန်​ရယ်​…ကျမ ရှင့်​ကို စိတ်​နာတယ်​….
ဟိမဝန္တာ လွမ်းရိပ်​မြိုင်​မှာ အမုန်း​တွေ တစ်​သီတစ်​တန်းနဲ့ ကျမ ကျဆုံးခဲ့တာမဟုတ်​ဘူး….
အပယ်​ခံတစ်​​ယောက်​လို နာကျင်​မှုမျိုးနဲ့ ကိုယ့်​အချစ်​ကို အဆိပ်​ခတ်​ပြီး ယိုင်​နဲ့နဲ့နှလုံးသားတစ်​စုံကို ဖက်​တွယ်​ရင်း ရှင်​ပ​စ္စေကဗုဒ္ဓါထံမှာ ကျမဆုပန်​ခဲ့မိတာပါ…
ရှင့်​စိတ်​ထဲထင်​ခဲ့ချင်​ ထင်​ခဲ့မယ်​…သုဘဒ္ဒါဟာ အငြိုးကြီးတဲ့… အမျက်​ကြီးတဲ့… ​ဒေါသကြီးတဲ့ မိန်းမရယ်​လို့…. ရှင်​ထင်​ချင်​သလိုသာ ထင်​ပါ​တော့ မင်း​ဆဒ္ဒန်​ရယ်​…
ဒီ​လောကကြီးတစ်​ခုလုံးကို မြေလှန်​​ပြီး ​မေးကြည့်​စမ်းလှည့်​ပါ.. ကိုယ့်​ချစ်​သူထံက ဦးစား​ပေးအချစ်​ခံချင်​တဲ့ မိန်းမဆိုလို့ ကျမတစ်​​ယောက်​တည်း ရှိခဲ့တာများလားလို့….
ရှင့်​အတွက်​​တော့ ခါချဉ်​​လေးတစ်​​ကောင်​… ဆို​ပေမယ့်​… ကျမအတွက်​​တော့ နာကျင်​ခြင်း မြင့်​မိုရ်​​တောင်​ကြီးပါ​ပဲလေ…ဆင်​ရှစ်​​သောင်းစု​ပေါင်း​နေတဲ့ မင်းရင်​ပြင်​ထက် ရှင်​​ပေးတဲ့ပန်းတစ်​ခက်​က အများအလယ်​မှာ အရှက်​ရ​စေခဲ့တယ် ​ဆိုတာ ရှင်​ကမှ သတိမထားမိခဲ့ပဲ…
မျက်​ရည်​ဝဲဝဲနဲ့ အံကြိတ်​ပြီး ခံရခက်​ခဲ့တယ်​ဆိုတာရှင်​ထင်​သလို ခါချဉ်လေးပါတဲ့ အင်​ကြင်းပန်းတစ်​ခက်​ ​ကြောင့်​မဟုတ်​ပါဘူး…
မဟာသုဘဒ္ဒါအ​ပေါ် ရှင့်​ရဲ့အ​ရေး​ပေးမှု​အောက်​မှာကျမ ကမ္ဘာကြီး မူး​နောက်​ပြာကျခဲ့ရတာပါ​လေ..
ရှင်​သိ​အောင်​ ထပ်​​ပြောခဲ့မယ်​မင်း​ဆဒ္ဒန်​…. ပထမ စူဠသုဘဒ္ဒါ မဟုတ်​ခဲ့ဖူးဆိုရင်​ ဒုတိယ မဟာသုဘဒ္ဒါ​တော့ ဘယ်​မိန်းမက မဖြစ်​ချင်​ခဲ့ဘူးဆိုတာ တစ်​​နေ့​နေ့​တော့ ရှင်​နားလည်​လာမှာပါ….
ဟင့်​အင်း…. ရှင်​အထင်​မလွဲပါနဲ့…အစွယ်​လိုသူမိဖုရား မဟုတ်​ခဲ့ပါဘူး…ရှင့်​အချစ်​တစ်​ခုတည်းကိုပဲ လိုချင်​ခဲ့တာပါ….
ဘဝချင်းမတူ​အောင်​ သံသရာခြားနားခဲ့​ပေမယ့်​ကျမ နှလုံးသားက ရှင့်​ကိုပဲစူးစူးနစ်​နစ်​ ချစ်​ခဲ့မိတာပါ မင်းဆဒ္ဒန်​ရယ်..​
ရှင့်​အစွယ်​ကို နား​ဋောင်းပန်​ဆင်​ လိုတယ်​ဆိုတာလည်း ကျမမှာ အ​ကြောင်းအရင်း​တွေရှိပါတယ်​.
ဟိမဝန္တာ အင်​ကြင်း​တောမြိုင်​ယံမှာရှင့်​ရဲ့ သက်​ဆိုင်​သူဖြစ်​ခဲ့တဲ့ ကျမကို ရှင်​ခုချိန်​ထိ သတိတရရှိ​သေးရဲ့လားဆိုတာ ကျမသိချင်​တယ်​…သတိတရနဲ့ လွမ်းဆွတ်​ တမ်းတမှုမျိုးကိုလည်း ကျမလိုချင်​မိတယ်​….
ဘဝချင်းခြားခဲ့တာ​တောင်​ ချစ်​အားမ​လျော့ခဲ့တဲ့ ကျမနှလုံးသားကို ရှင်​ ​လျှော့မတွက်​ပါနဲ့ မင်း​ဆဒ္ဒန်​…
တစ်​ဖတ်​သတ်​ဆိုရင်​​တောင်​ ကျမက ​ကျေ​ကျေနပ်​နပ်​ကြီး သံသရာအဆက်​ဆက်​ ယူသွားအုံးမှာမို့လို့ပါ…
ဟုတ်​တယ်​… ကျမရှင့်​ကို အဲ့​လောက်​ထိချစ်​တယ်​….
ဒါ​ပေမယ့်​…. နားလည်​မှုလွဲမှားခြင်းရဲ့ ဆုလဒ်​​တွေ​ကြောင့်​ကျမဟာ မိန်းမရိုင်းကြီး သုဘဒ္ဒါဖြစ်​ခဲ့ရတာပါ မင်းဆဒ္ဒန်​ရယ်​…..
ရှင့်​အစွယ်​ကို နားဋောင်း ပန်​ဆင်​လိုတယ်​လို့ ​သောနုတ္ထိုရ်​ကို ကျမမှာကြားလိုက်​တယ်​ဆို​ပေမယ့်​….
အစွယ်​ကို အာ​ခေါင်​ရင်းက ဖြတ်​ခဲ့ရမယ်​လို့ ကျမမမှာခဲ့မိဘူး… အမိန့်​လည်းမ​ပေးခဲ့ပါဘူး….
နား​ဋောင်းလုပ်​ဝတ်​လို့ရမယ့်​ ရှင့်​ရဲ့အစွယ်​အဖျား​လေး​လောက်​ပဲ ကျမကလိုချင်​ခဲ့မိတာပါ…
ရှင်​အနားမှာ ရှိ​နေမ​ပေးရင်​​တောင်​ ရှင့်​ရဲ့အ​သွေးအသား​လေးတစ်​ခု ကျမအနားမှာ အ​ဖော်​ပြု​နေရုံနဲ့ ကျမနှလုံးသားကို နှစ်​သိမ့်​ချင်​လို့ပါ….
ရှင်​သာ ကျမကိုတကယ်​ချစ်​ရင်​ နား​ဋောင်းတစ်​ဆင်​စာ အစွယ်​အဖျား​လေး​တော့ ရှင်​ကျမကို ​ပေးနိုင်​မှာပဲမဟုတ်​လား….
ခု​တော့…. မုဆိုး​လျှောက်​တင်​သမျှကို မစဉ်းစားမဆင်​ခြင်​ပဲ ရှင်​က အာ​ခေါင်​ရင်းကိုလွှနဲ့ထိုး ဆိုးရွားတဲ့​ဝေဒနာကို အံတုလို့ မိန်းမဆိုးအမုန်း ဒီဘဝဒီမျှနဲ့ တုံး​စေ​တော့ဆိုပြီး လက်​လွတ်​စပယ်​ ကျမ​ကြောင့်​ ရှင်​​သေပွဲဝင် ​ရတယ်​တဲ့​လေ…
ကျမက မှားခဲ့တယ်​ဆို​ပေမယ့်​… ရှင်​က မိုက်​ခဲ့တယ်​ မင်း​ဆဒ္ဒန်​…. နား​ဋောင်းတစ်​ဆင်​စာ ပမာဏဟာ အာ​ခေါင်​ရင်းက​​နေဖြတ်​ချမှ ရမှာမို့လို့လား…
မုဆိုးတင်​သမျှကို ကြားရပြီးစိတ်​နာတဲ့ ​လေသံနဲ့မိန်းမဆိုးအမုန်း ဒီဘဝဒီမျှနဲ့ တုံး​စေ​တော့လို့ ​ပြောရင်း ရှိရှိသမျှအပြစ်​​တွေကို ကျမအ​ပေါ်ပဲစုပုံရက်​ခဲ့တယ်​….
ကျမ မှာ​တော့ မုဆိုးထမ်းလာတဲ့ ရှင့်​အစွယ်​​ဖွေး​ဖွေးကို ခပ်​​ဝေး​ဝေးက လှမ်းမြင်​ရတည်းက အရာရာဟာ လွဲမှားစွာ မှားယွင်းခဲ့ပြီလို့ သိလိုက်​ပြီး သောကအ​ပေါင်းဟာ ဖိစီးထိုးနှက်​ခဲ့ပါတယ်​….
​နောက်​ဆုံး ထွက်​သက်​​တွေအထိ နာကျင်​ခံခက်​တဲ့ ​လေသံနဲ့ ရှင်​ ကျမကို ​ပြောရက်​ခဲ့တဲ့ မိန်းမဆိုးအမုန်း ဒီဘဝဒီမျှနဲ့တုံး​စေ​တော့… ဆိုတဲ့စကားဟာ ကျမက ရှင့်​ကို တမင်​မုန်းလို့ပဲ သတ်​​စေခဲ့သလိုပါပဲလား….
မဟုတ်​ရပါဘူးမင်း​ဆဒ္ဒန်​ရယ်​…. အစွယ်​​လေး နား​ဋောင်းတစ်​ဆင်​စာ ပဲလိုချင်​ခဲ့တာပါ…
အာ​ခေါင်​ရင်းက​နေ ​သွေး​မြေကျ ဖြတ်​​ပေးဖို့ ကျမက ဘယ်​လိုနှလုံးသားမျိုးနဲ့ ရှင့်​ကိုရက်​စက်​နိုင်​မှာတဲ့လဲ…
နာကျည်းချက်​​တွေနဲ့ ရှင်​က ကျမကို နှုတ်​ဆက်​ခဲ့တယ်​​ပေါ့….
မျက်​နှာ​ငွေလ ရွှင်​ပျပျနှင့်​ သခင်​မ…ဝမ်း​မြောက်​ပါ​လေ​တော့တဲ့လား….
နား​ဋောင်းတစ်​ဆင်​စာ​လေးအတွက်​ အာ​ခေါင်းရင်းက​နေ ဖြတ်​ယူခဲ့တဲ့ မုဆိုးမိုက်​​ကြောင့်​ လွဲမှားတဲ့ သံသယ​တွေနဲ့ သုဘဒ္ဒါ နှလုံးသားဟာ ​သွေး​မြေကျခဲ့ရပါပြီ​လေ….
သုဘဒ္ဒါ မျက်​နှာတစ်​ခုလုံး တိမ်​ဖုံးပြီး လမိုက်​ခဲ့ရပါပြီ…
သခင်​မ…ဝမ်း​မြောက်​​စေချင်​တဲ့ ရှင့်​ဆု​တောင်း​တွေလည်း မပြည့်နိုင်​​တော့ပါဘူး…
နှမ​တော်​ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်​ဖြစ်​တဲ့ ရှင့်​ကို ​သေ​အောင်​သတ်​မိခဲ့သလို ဖြစ်​သွားခဲ့တဲ့အတွက်​ ကျမ ဘယ်​လိုနည်းနဲ့မှ ရွှင်​ရွှင်​ပျပျ ​​ပျော်​မ​နေရ​တော့ပါဘူး..
အခု….. နှမ​တော်​ အသည်းစိုင်​တစ်​ခုလုံး ကွဲအက်​ ပျက်​စီးပြီး ကံ​တော်​ကုန်​လု​နေပါပြီ….မင်း​ဆဒ္ဒန်​…
မနက်​ဖြန်​​တွေအဆက်​ဆက်​ ​နောက်​ထပ်​ ရှိခဲ့အုံးမယ်​ဆိုရင်​​တော့…
ရှင့်​ရဲ့ သံသယ​တွေအတွက်​ ရှင်းပြခွင့်​ရလိုက်​ချင်​ပါတယ်​​လေ…
တကယ်​ဆို ကျမရင်​ထဲက ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာကို ရှင်​မမြင်​ပဲ မိန်းမိရိုင်းကြီးရဲ့ အမုန်းလို့ပဲ ရှင်​က ထင်​ခဲ့တာကိုး….
ရှိပါ​စေ​တော့… ဒီဘဝ ဒီမျှနဲ့ပဲ ရှိပါ​စေ​တော့​လေ…
တကယ်​ဆိုရင်​….. ကျမက….မှားခဲ့တယ်​ဆို​ပေမယ့်​ ရှင်​က……မိုက်​ခဲ့ပါတယ်​မင်း​ဆဒ္ဒန်​…..
ဘာလို့လဲဆို​တော့… မိန်းမသားဆိုတာ…. ကိုယ့်​ချစ်​သူရဲ
ပထမ……. စူဠသုဘဒ္ဒါ မဟုတ်​ခဲ့ရဘူးဆိုရင်​
ဒုတိယ…..မဟာသုဘဒ္ဒါ ​တော့ ဘယ်​​တော့မှ အဖြစ်​မခံချင်​ကြဘူးဆိုတာ
ဟိမဝန္တာ ​တောမြိုင်​ယံမှာ ဆင်​အ​ ​ပေါင်ြး​ခံရံပြီး စိုးစံခဲ့တဲ့
မင်း​ဆဒ္ဒန်​ဧကရာဇ်​ ကြီးမှ မသိခဲ့တာကိုး…
တကယ်​​တော့ သုဘဒ္ဒါ​ဆိုတဲ့ နှမ​တော်​က ​မောင်​ကြီးမင်းဆဒ္ဒန်​ကို မုန်းခဲ့တာ မဟုတ်​ပါဘူး
အငျကွငျးပနျးမှာ ခါခဉျြလေးကပျရုံနဲ့ ကမ်ဘာအဆကျဆကျ သုဘဒ်ဒါမုနျးရကျခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး…
ပွိုငျဘကျနဲ့ ယှဉျရငျ အခဈြတှအေကုနျအစငျ မရခဲ့လို့သုဘဒ်ဒါရငျမှာ နာကငျြကွကှေဲခဲ့ရတာပါ…. ဒါတှကေို ရှငျနားလညျရဲ့လား မငျးဆဒ်ဒနျ
ဟိမဝန်တာ တောငျစဉျခုနဈထပျမှာကမြဟာ ရှငျ့အတှကျဆို အသကျပေးဖို့လညျး အဆငျသငျ့ဖွဈခဲ့ပါရကျနဲ့ ဘဝတဈခုလုံးပေးဆပျ ခဈြခဲ့တာတောငျ ရှငျပွနျပေးခဲ့တဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာက ဒုတိယ တဲ့လား….ဟငျ့အငျး…
ပထမခဈြခွငျး မဟုတျရငျ ဒုတိယအဖွညျ့ခံတော့ ဘယျမိနျးမသားကမှ မဖွဈခငျြဘူး….
မဖွဈနိုငျဘူး မငျးဆဒ်ဒနျ… မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး
ဒုတိယ ဆိုတာ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ မဖွဈနိုငျခဲ့ပါဘူး မငျးဆဒ်ဒနျရယျ…ကမြ ရှငျ့ကို စိတျနာတယျ….
ဟိမဝန်တာ လှမျးရိပျမွိုငျမှာ အမုနျးတှေ တဈသီတဈတနျးနဲ့ ကမြ ကဆြုံးခဲ့တာမဟုတျဘူး….
အပယျခံတဈယောကျလို နာကငျြမှုမြိုးနဲ့ ကိုယျ့အခဈြကို အဆိပျခတျပွီး ယိုငျနဲ့နဲ့နှလုံးသားတဈစုံကို ဖကျတှယျရငျး ရှငျပစ်စကေဗုဒ်ဓါထံမှာ ကမြဆုပနျခဲ့မိတာပါ…
ရှငျ့စိတျထဲထငျခဲ့ခငျြ ထငျခဲ့မယျ…သုဘဒ်ဒါဟာ အငွိုးကွီးတဲ့… အမကျြကွီးတဲ့… ဒေါသကွီးတဲ့ မိနျးမရယျလို့…. ရှငျထငျခငျြသလိုသာ ထငျပါတော့ မငျးဆဒ်ဒနျရယျ…
ဒီလောကကွီးတဈခုလုံးကို မွလှေနျပွီး မေးကွညျ့စမျးလှညျ့ပါ.. ကိုယျ့ခဈြသူထံက ဦးစားပေးအခဈြခံခငျြတဲ့ မိနျးမဆိုလို့ ကမြတဈယောကျတညျး ရှိခဲ့တာမြားလားလို့….
ရှငျ့အတှကျတော့ ခါခဉျြလေးတဈကောငျ… ဆိုပမေယျ့… ကမြအတှကျတော့ နာကငျြခွငျး မွငျ့မိုရျတောငျကွီးပါပဲလေ…ဆငျရှဈသောငျးစုပေါငျးနတေဲ့ မငျးရငျပွငျထကျ ရှငျပေးတဲ့ပနျးတဈခကျက အမြားအလယျမှာ အရှကျရစခေဲ့တယျ ဆိုတာ ရှငျကမှ သတိမထားမိခဲ့ပဲ…
မကျြရညျဝဲဝဲနဲ့ အံကွိတျပွီး ခံရခကျခဲ့တယျဆိုတာရှငျထငျသလို ခါခဉျြလေးပါတဲ့ အငျကွငျးပနျးတဈခကျ ကွောငျ့မဟုတျပါဘူး…
မဟာသုဘဒ်ဒါအပျေါ ရှငျ့ရဲ့အရေးပေးမှုအောကျမှာကမြ ကမ်ဘာကွီး မူးနောကျပွာကခြဲ့ရတာပါလေ..
ရှငျသိအောငျ ထပျပွောခဲ့မယျမငျးဆဒ်ဒနျ…. ပထမ စူဠသုဘဒ်ဒါ မဟုတျခဲ့ဖူးဆိုရငျ ဒုတိယ မဟာသုဘဒ်ဒါတော့ ဘယျမိနျးမက မဖွဈခငျြခဲ့ဘူးဆိုတာ တဈနနေ့တေ့ော့ ရှငျနားလညျလာမှာပါ….
ဟငျ့အငျး…. ရှငျအထငျမလှဲပါနဲ့…အစှယျလိုသူမိဖုရား မဟုတျခဲ့ပါဘူး…ရှငျ့အခဈြတဈခုတညျးကိုပဲ လိုခငျြခဲ့တာပါ….
ဘဝခငျြးမတူအောငျ သံသရာခွားနားခဲ့ပမေယျ့ကမြ နှလုံးသားက ရှငျ့ကိုပဲစူးစူးနဈနဈ ခဈြခဲ့မိတာပါ မငျးဆဒ်ဒနျရယျ..
ရှငျ့အစှယျကို နားဋောငျးပနျဆငျ လိုတယျဆိုတာလညျး ကမြမှာ အကွောငျးအရငျးတှရှေိပါတယျ.
ဟိမဝန်တာ အငျကွငျးတောမွိုငျယံမှာရှငျ့ရဲ့ သကျဆိုငျသူဖွဈခဲ့တဲ့ ကမြကို ရှငျခုခြိနျထိ သတိတရရှိသေးရဲ့လားဆိုတာ ကမြသိခငျြတယျ…သတိတရနဲ့ လှမျးဆှတျ တမျးတမှုမြိုးကိုလညျး ကမြလိုခငျြမိတယျ….
ဘဝခငျြးခွားခဲ့တာတောငျ ခဈြအားမလြော့ခဲ့တဲ့ ကမြနှလုံးသားကို ရှငျ လြှော့မတှကျပါနဲ့ မငျးဆဒ်ဒနျ…
တဈဖတျသတျဆိုရငျတောငျ ကမြက ကကြေနြေပျနပျကွီး သံသရာအဆကျဆကျ ယူသှားအုံးမှာမို့လို့ပါ…
ဟုတျတယျ… ကမြရှငျ့ကို အဲ့လောကျထိခဈြတယျ….
ဒါပမေယျ့…. နားလညျမှုလှဲမှားခွငျးရဲ့ ဆုလဒျတှကွေောငျ့ကမြဟာ မိနျးမရိုငျးကွီး သုဘဒ်ဒါဖွဈခဲ့ရတာပါ မငျးဆဒ်ဒနျရယျ…..
ရှငျ့အစှယျကို နားဋောငျး ပနျဆငျလိုတယျလို့ သောနုတ်ထိုရျကို ကမြမှာကွားလိုကျတယျဆိုပမေယျ့….
အစှယျကို အာခေါငျရငျးက ဖွတျခဲ့ရမယျလို့ ကမြမမှာခဲ့မိဘူး… အမိနျ့လညျးမပေးခဲ့ပါဘူး….
နားဋောငျးလုပျဝတျလို့ရမယျ့ ရှငျ့ရဲ့အစှယျအဖြားလေးလောကျပဲ ကမြကလိုခငျြခဲ့မိတာပါ…
ရှငျအနားမှာ ရှိနမေပေးရငျတောငျ ရှငျ့ရဲ့အသှေးအသားလေးတဈခု ကမြအနားမှာ အဖျောပွုနရေုံနဲ့ ကမြနှလုံးသားကို နှဈသိမျ့ခငျြလို့ပါ….
ရှငျသာ ကမြကိုတကယျခဈြရငျ နားဋောငျးတဈဆငျစာ အစှယျအဖြားလေးတော့ ရှငျကမြကို ပေးနိုငျမှာပဲမဟုတျလား….
ခုတော့…. မုဆိုးလြှောကျတငျသမြှကို မစဉျးစားမဆငျခွငျပဲ ရှငျက အာခေါငျရငျးကိုလှနဲ့ထိုး ဆိုးရှားတဲ့ဝဒေနာကို အံတုလို့ မိနျးမဆိုးအမုနျး ဒီဘဝဒီမြှနဲ့ တုံးစတေော့ဆိုပွီး လကျလှတျစပယျ ကမြကွောငျ့ ရှငျသပှေဲဝငျ ရတယျတဲ့လေ…
ကမြက မှားခဲ့တယျဆိုပမေယျ့… ရှငျက မိုကျခဲ့တယျ မငျးဆဒ်ဒနျ…. နားဋောငျးတဈဆငျစာ ပမာဏဟာ အာခေါငျရငျးကနဖွေတျခမြှ ရမှာမို့လို့လား…
မုဆိုးတငျသမြှကို ကွားရပွီးစိတျနာတဲ့ လသေံနဲ့မိနျးမဆိုးအမုနျး ဒီဘဝဒီမြှနဲ့ တုံးစတေော့လို့ ပွောရငျး ရှိရှိသမြှအပွဈတှကေို ကမြအပျေါပဲစုပုံရကျခဲ့တယျ….
ကမြ မှာတော့ မုဆိုးထမျးလာတဲ့ ရှငျ့အစှယျဖှေးဖှေးကို ခပျဝေးဝေးက လှမျးမွငျရတညျးက အရာရာဟာ လှဲမှားစှာ မှားယှငျးခဲ့ပွီလို့ သိလိုကျပွီး သောကအပေါငျးဟာ ဖိစီးထိုးနှကျခဲ့ပါတယျ….
နောကျဆုံး ထှကျသကျတှအေထိ နာကငျြခံခကျတဲ့ လသေံနဲ့ ရှငျ ကမြကို ပွောရကျခဲ့တဲ့ မိနျးမဆိုးအမုနျး ဒီဘဝဒီမြှနဲ့တုံးစတေော့… ဆိုတဲ့စကားဟာ ကမြက ရှငျ့ကို တမငျမုနျးလို့ပဲ သတျစခေဲ့သလိုပါပဲလား….
မဟုတျရပါဘူးမငျးဆဒ်ဒနျရယျ…. အစှယျလေး နားဋောငျးတဈဆငျစာ ပဲလိုခငျြခဲ့တာပါ…
အာခေါငျရငျးကနေ သှေးမွကြေ ဖွတျပေးဖို့ ကမြက ဘယျလိုနှလုံးသားမြိုးနဲ့ ရှငျ့ကိုရကျစကျနိုငျမှာတဲ့လဲ…
နာကညျြးခကျြတှနေဲ့ ရှငျက ကမြကို နှုတျဆကျခဲ့တယျပေါ့….
မကျြနှာငှလေ ရှငျပပြနြှငျ့ သခငျမ…ဝမျးမွောကျပါလတေော့တဲ့လား….
နားဋောငျးတဈဆငျစာလေးအတှကျ အာခေါငျးရငျးကနေ ဖွတျယူခဲ့တဲ့ မုဆိုးမိုကျကွောငျ့ လှဲမှားတဲ့ သံသယတှနေဲ့ သုဘဒ်ဒါ နှလုံးသားဟာ သှေးမွကေခြဲ့ရပါပွီလေ….
သုဘဒ်ဒါ မကျြနှာတဈခုလုံး တိမျဖုံးပွီး လမိုကျခဲ့ရပါပွီ…
သခငျမ…ဝမျးမွောကျစခေငျြတဲ့ ရှငျ့ဆုတောငျးတှလေညျး မပွညျ့နိုငျတော့ပါဘူး…
နှမတျောရဲ့ နှလုံးသညျးပှတျဖွဈတဲ့ ရှငျ့ကို သအေောငျသတျမိခဲ့သလို ဖွဈသှားခဲ့တဲ့အတှကျ ကမြ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ ရှငျရှငျပပြ ပြျောမနရေတော့ပါဘူး..
အခု….. နှမတျော အသညျးစိုငျတဈခုလုံး ကှဲအကျ ပကျြစီးပွီး ကံတျောကုနျလုနပေါပွီ….မငျးဆဒ်ဒနျ…
မနကျဖွနျတှအေဆကျဆကျ နောကျထပျ ရှိခဲ့အုံးမယျဆိုရငျတော့…
ရှငျ့ရဲ့ သံသယတှအေတှကျ ရှငျးပွခှငျ့ရလိုကျခငျြပါတယျလေ…
တကယျဆို ကမြရငျထဲက ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ရှငျမမွငျပဲ မိနျးမိရိုငျးကွီးရဲ့ အမုနျးလို့ပဲ ရှငျက ထငျခဲ့တာကိုး….
ရှိပါစတေော့… ဒီဘဝ ဒီမြှနဲ့ပဲ ရှိပါစတေော့လေ…
တကယျဆိုရငျ….. ကမြက….မှားခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ ရှငျက……မိုကျခဲ့ပါတယျမငျးဆဒ်ဒနျ…..
ဘာလို့လဲဆိုတော့… မိနျးမသားဆိုတာ…. ကိုယျ့ခဈြသူရဲ
ပထမ……. စူဠသုဘဒ်ဒါ မဟုတျခဲ့ရဘူးဆိုရငျ
ဒုတိယ…..မဟာသုဘဒ်ဒါ တော့ ဘယျတော့မှ အဖွဈမခံခငျြကွဘူးဆိုတာ
ဟိမဝန်တာ တောမွိုငျယံမှာ ဆငျအ ပေါငျးခွံရံပွီး စိုးစံခဲ့တဲ့
မငျးဆဒ်ဒနျဧကရာဇျ ကွီးမှ မသိခဲ့တာကိုး…
တကယျတော့ သုဘဒ်ဒါဆိုတဲ့ နှမတျောက မောငျကွီးမငျးဆဒ်ဒနျကို မုနျးခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး
မျက်နှာပေါ်ကတင်းတိပ်တွေကို ဂျင်းနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေ ရောလိမ်းပြီး ဖယ်ရှားလိုက်ရအောင်…!
ခိုးခြင်း မျိုးစုံ ကို ကျူး လွန် ခဲ.တဲ့ လူ ချမ်း သာ မိသား စု ရဲ . အကုသိုလ် အကျိုးပေး…!
This Month : 39894
This Year : 235292
Total Users : 594316
Total views : 2728279